Foldable Vertical Square
Inopeta yakatwasuka sikweya ipfungwa imwe chete nefoldable horizontal square, yako imwe yakasarudzika sarudzo yekuseta zviitiko zvako.Zviri nyore kupeta, kuchengeta uye kutakura.Inoshandiswa zvakanyanya mumakosi akasiyana, mitambo yezhizha, uye zviitiko kukwidziridzwa kana zvimwe zviitiko.
Zvishandiso: Inopetwa yakatwasuka yakatwasuka, shanda seimwe mhando yeSideline A furemu, chiratidzo chikuru uye kushambadzira kuratidza kwezviitiko zvemitambo, kutengeserana show, maparade kana chero chimwe chiitiko mukati.
Foldable vertical square ipfungwa imwechete ine foldable yakatwasuka sikweya, yako imwe yakasarudzika sarudzo yekuseta zviitiko zvako.Zviri nyore kupeta, kuchengeta uye kutakura.rinoshandiswa zvakanyanya mumakosi akasiyana, mitambo yezhizha, uye zviitiko kukwidziridzwa kana zvimwe zviitiko.
(1) Mabhena anogona kumonyaniswa kuita isingasviki hafu yehukuru hwayo, kuitira kuchengetedza nyore uye kutakura.
(2) Frame yakagadzirwa yakasimba uye inochinjika inoumbwa danda
(3) Tension system/Velcro distancing tambo mumativi ese nepazasi/ chengeta graphic flat uye yakagadzikana
(4) huremu hwakawedzerwa hunoshanda (mapegi, bhegi remvura, nezvimwewo).
(5) Seti imwe neimwe inouya nebhegi rekutakura.
Item Code Display dimension Kurongedza saizi
Zvakapfuura: Foldable Horizontal Square
Zvinotevera: Half Moon Banner